Home Somali News Somalia: Ciidamada AMISOM Oo Koonfurta Somalia Ku Xasuuqay Dhalinyaro Kubad Ciyaaraysay iyo...
Ugu yaraan 24 qof oo shacab ah ayaa ku dhintay 22 kalena way ku dhaawacmeen inta la og yahay hawlgal ciidamada Midawga Africa ee Somalia ku sugan ka fuliyeen magaalada Marka ee koonfurta Somalia.
Warar faahfaahsan oo ka soo baxaya dhacdadaasi Salaasaddii dhacday ayaa sheegaya in dadka lalaayay ahaayeen dhalin yaro kubad ciyaaraysa iyo dad guryaha loogu galay, iyadoo sidoo kalena ugu yaraan 2 dumar ah la kufsaday.
Odayaal iyo hawl wadeenno caafimaad ayaa telefishanka Al-jazeera u sheegay in ciidanka AU-da ee AMISOM rasaas ku fureen dadka degaanka oo aan hubaysnayn, islamarkaana meesha uu ka dhacay xasuuq ba’an.
“Ciidamada oo wata baabuurta gaashaaman ayaa tagay Garoon ciyaareed,kadibna waxay rasaas ku fureen wiilal ciyaarayay Kubad, iyagoo dilay 9, sidoo kalena dhaawacay 8” ayuu yidhi Xaaji Muuse Maxamed oo isagoo ku sugan magaalo xeebeeda Marka ee Shabeellada hoose khadka telefoonka ugu waramay Al-jazeera.
Waxa uu intaasi raaciyay “Kadibna waxay tageen guryo u dhow Garoonka, iyagoo dadkii dibada uga soo jiiday kadibna toogtay 17 qof, sidoo kalena waxay dhaawacyo xun gaadhsiiyeen 14 qof”. Waxa uu sidoo kale sheegay inay AMISOM kufsadeen laba haween ah.
Sidoo kale hawl wadeen caafimaad ayaa sheegay in halkaasi uu ka dhacay Xasuuq islamarkaana ay dhaawaca u direen Muqdisho oo u jirtay 109Km “Wuxuu ahaa xasuuq loo gaystay dad aan waxba galabsan.dadkii dhaawacmay waxaanu dhakhtarka ku gaynay gaadhi-gacanno laakiin, qaar badan waxaanu u dirnay Muqdisho, maxaa yeelay ma dawayn karro”, ayuu yidhi Maxamed Cali oo ah hawl wadeen caafimaad.
Maxamed Cali waxa uu intaasi raaciyay “Dadkani waxba may samayn, umanay qalmayn sidan, haddii AMISOM doonayso inay la dagaalamaan Al-shabaab way yaqaanan halkay Al-shabaab joogto ee ha la dagaalamaan, maaha inay dadka aan waxba galabsan laayaan”
Somalia waxaa ku sugan 22,000 oo ciidamada AMISOM ah kuwaasi oo ka kala socday wadamada Burundi, Uganda, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti, waxaanay halkaasi u joogaan la dagaalanka kooxda Al-shabaab ee Somalia ka dagaalanta.
AMISOM ayaa marar badan lagu eedeeyay xad gudubyo shacbiga ka dhan ah oo ay ka gaystaan qaybo ka mid ah Somalia, halka Al-shabaab marar badan weeraro laxaad leh u gaysato waxaana ugu dambeeyay weerar saldhiga Leego ay ku qaadeen oo lagu dilay 50 ciidamada Burundi ah. Waxaana haatan la sheegayaa inay ka goodeen booyad laga gubay taa badalkeedana ay shacbiga laayeen.